ဘယ်လောက် mussels ချက်ပြုတ်ရန်, အေးခဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
-2-3မိနစ်
ဂရုတစိုက်ဆေးကြော mussels ကိုယူ။ သူတို့ထံမှရေကိုညှစ်ခြင်းနှင့်အမဲဆီမာဂျင်းသို့မဟုတ်ထား၏ ပိန်သောဆီ разогретую сковородку. Мидии "выпустят" из себя воду и будут в ней сперва вариться. После того как эта вода практически вся выкипит — добавьте на сковородку еще маргарина или масла, и немного пожарьте мидии в одиночестве, затем выложите на сковородку порезанный ကြက်သွန်, ကြက်သွန်အညိုရောင်သည်အထိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ရံဖန်ရံခါကြော်။ ကြက်သွန်နီအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်၊ သင်ဤအရာအလုံးစုံကိုစတင်စားသုံးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ကြက်ဥကြက်ဥနှစ်ကောင်သို့မဟုတ်နှစ်ကောင်ကိုကြက်ဥကြက်ဥနှင့်လတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီးများကိုမောင်းနိုင်သေးသည်။ အနည်းငယ်ရောနှော။ ကြော်နိုင်သည်။ အလျင်အမြန်လိမ်းပြီးသောဥများသည်အသင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ ပူပြင်းသည့်အထိအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပါ။ ငရုတ်ကောင်းများကိုအမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဖြန်း။ မြည်းစမ်းရန်ဆားငန်ပါ။
mussels နှင့်အတူ Pilaf
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အသားပြုတ် mussels 200-250 g, ဆန် - 1 ဖန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ 3-4 ဇွန်း၊ ကြက်သွန်နီ 3-4 pcs, မုန်လာဥ 2-3 pcs, ဆား, နံ့သာများ၊ အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီ 50 g ။
ထို့နောက်ကုန်တယ်ကြက်သွန်နီနှင့်မုန်လာဥနီနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၌ဖြတ်ကြော် pripustit Mussels ။ အဆိုပါ mussels ဆူပွက်နေဖြင့်ရရှိသောဟင်းရည်, pripuskaniya ဆန်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ပုံကိုလျှော်ထက်ဝက်သည်အထိပြေးလေ၏။ ကိုပြင်ဆင်အစားအစာများကိုမွှေနှင့်စေတနာမှငါဆောင်ခဲ့မည်အနိမ့်အပူပေါ်တစ်ဦးအလုံပိတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ, ဆား, ငရုတ်ကောင်း၏ 1 /2ခွက်ထည့်ပါ။ ဖော့လတ်ဆတ်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီးတင်ပြရန်ကောင်းသော။
အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီနှင့်အတူ risotto အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်သို့မဟုတ်
ရေ3မိနစ်ဆူ၌တည်၏။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကြော်နိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ်မကြာသေးမီကကျွန်မသုပ်ငံပြာရည်ပင်လယ်စာအေးမြဖန်ဆင်း: Mayonnaise ပဲပိစပ်ဆော့စ်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူကို (မျက်စိပေါ်နွေ) နှင့်အတူရောနှော။ ငါအရသာကြိုက်တယ်။
အနာစိမ်း3မိနစ်။
ဒါပေမယ့်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဖျော်ရည်, ဖျော်ရည်ကိုငါသွန်းလောင်းရန်သာ။ ကောင်း၏ ရှောကျသီး, ဆား, ငရုတ်ကောင်း။
လတ်ဆတ်တဲ့ mussels 7-10 မိနစ်ပြုတ်။ အေးစက်နေတဲ့ mussels 5-7 မိနစ်ပြုတ်။
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,215 စက္ကန့်ကျော် Generate ။